Iiflethi ezikhethekileyo kwi-Tverskaya .Eyona ndawo - I-Airbnb
Iiflethi ezikhethekileyo kwi-Tverskaya .Eyona ndawo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguYury
Hlala entliziyweni yesixeko sam kwaye uzive usekhaya. Indawo ehloniphekileyo kunye nemfashini kufuphi nesikhululo se-metro saseMayakovskaya (imizuzu emi-2 yokuhamba) kunye nesitrato saseTverskaya. Le ndlu ibekwe kwiziko lembali laseMoscow. I-Red Square yizikhululo ze-metro ezi-2 kude, okanye ukuhamba ngemizuzu eyi-15 ecaleni kweTverskaya Street. Kukho iivenkile ezininzi kunye neendawo zokutyela ezibalaseleyo kufutshane. Intendelezo ezolileyo kunye nokugqunywa kwesandi esilungileyo kwigumbi lokuhlala. Embindini weMoscow. Wamkelekile akhaya.
I-sofa yokugoqa ebanzi iya kunika indawo yokulala ekhululekile kunye nekhululekile. ITV enkulu yeplasma. Ifulethi ine-wi-fi ekhawulezayo, umabonwakude osemhlabeni kunye nokhetho olukhulu lweziteshi zeTV zaseRussia kunye nezangaphandle!
Ikhitshi ebanzi enayo yonke into yokulungiselela izitya ezimnandi, ngenxa yobukho besitovu segesi, i-oven microwave, iketile, njl. Ityuwa, iswekile, ioli kunye neziqholo, ukutya okuziinkozo, ukutya okuziinkozo, iti, ikofu.
Umatshini wokuhlamba, intsimbi, isomisi seenwele nazo ziyafumaneka. Igumbi lokuhlambela lineeshampu, iijeli zeshawa, iphepha langasese elongezelelweyo kunye nesicoci sempahla.
4.90 · Izimvo eziyi-299
Indawo ehloniphekileyo kunye nemfashini kufuphi nesikhululo se-metro saseMayakovskaya (imizuzu emi-2 yokuhamba) kunye nesitrato saseTverskaya. Le ndlu ibekwe kwiziko lembali laseMoscow. I-Red Square yizikhululo ze-metro ezi-2 okanye imizuzu eyi-15 ngeenyawo. Ngena kwimbali yesixeko sam, hamba ecaleni kwamachibi kaPatriarch, izitrato ezijikajikayo kunye nezikwere ezinengxolo. Kufuphi nendlu edumileyo ye-302BIS kunye ne-museum-indlu yaseBulgakov. Intliziyo yeMoscow. Ndijonge phambili ukukubona!
Umbuki zindwendwe ngu- Yury
Izimvo eziyi-1 491
Ndiya kuhlala ndikuvuyela ukukwamkela, ndingahlala ndikunceda ngayo nayiphi na imibuzo, nangaliphi na ixesha losuku!